Afaka miditra amin’ny adihevi-panjakana momba ny lalàmpanorenana vaovao amin’ny alalan’ny fitaovana nomerika ankehitriny ny Kiobàna · Global Voices teny Malagasy
MpanoratraSandra Abd'Allah-Alvarez Ramírez
Voadika ny 13 Septambra 2018 5:24 GMT
Vakio amin'ny teny English, Français, русский, polski, Ελληνικά, Español
Tanora mampiasa ny tolotra Wi-Fi ho an'ny daholobe ao amin'ny kianja iray ao Havana. Saripikan'i ‘Kaldari’. Lisansa Creative Commons CC0 1.0. Azon'ny rehetra ampiasaina ny sary.
Ny Lalàm-panorenana vaovao ao Kiobà ankehitriny no lohahevitry ny adihevi-bahoaka tohanan'ny fanjakana manerana ny firenena. Mba handrisihana ny fandraisana anjara betsaka eo amin'ny vahoaka, maro ireo fitaovana an-tserasera novolavolaina mampifandray ny Kiobana avy amin'ny saranga rehetra, anisan'izany ireo monina ivelan'ny firenena, mba hizara ny fomba fijery sy ny hevitr'izy ireo momba ny tolotra fanavaozana ny lalàm-panorenana.
Nanomboka tamin'ny 13 aogositra ny adihevitra ary hitohy hatramin'ny 15 Novambra amin'ity taona ity, ka aorian'izany, dia ho apetraka sy hofidiana ny fanovana heverina fa mety.
Iray amin'ireo teboka mahazatra indrindra nentina tamin'ity tetikasa ity ny famongorana ny komonisma izay fototra voalohan'ny foto-kevi-panjakana, ary koa ny andininy faha-68, izay manambara fa ny fanambadiana dia fifamatorana eo amin'ny olona roa manana fahafahana ara-dalàna hanao izany. Ity farany ity indrindra indrindra, no mandray ny firaisana ara-dalàna eo amin'ny olona mitovy fananahana, izay noheverin'ny maro fa jiro maitso amin'ny fitovian'ny fanambadiana.
“Firenena sy ny fifindra-monina”
Iray amin'ireo fitaovana ao an-toerana ny sehatra iray ao anatin'ny vavahadin-tserasera “Firenena sy Fifindra-monina“, izay napetraky ny Minisiteran'ny Raharaham-bahiny ao Kiobà.
Pikantsary tamin'ny sehatra an-tserasera hizarana hevitra sy fanamarihana amin'ny alàlan'ny sehatry ny governemanta. Ahitana tetikasa ho an'ny lalàm-panorenana vaovao ny pejy ary ahitana rohy mankany amin'ny antontan-taratasy fanampiana mitarika ny mpiserasera handefa ny tahiriny sy ny heviny.
Nanomboka niasa tamin'ny fiandohan'ny Septambra ny sehatra nomerika. Ahitana lahatsoratra sy antotan-taratasy mitarika ny mpiserasera amin'ny alàlan'ny dingana sy maodely antserasera ahafahan'ny mpiserasera mandefa ny fanehoan-keviny sy ny fanamarihany ny tranonkala. Na dia izany aza, tsy nahandry izany ny fiarahamonim-pirenena mandra-panokafana ny sehatra ary nitodika tamin'ny tambajotra sosialy mba hanomboka adihevitra ao amin'ny pejy ampiantranoin'ny Facebook na amin'ny lahatsoratra avy amin'ny loharanom-baovao an-tserasera toy ny Granma na Cubadebate, izay samy tantanin'ny governemanta Kiobana.
Saingy mba hahafahan'ireo fifanakalozan-kevitra tsy am-pahibemaso ireo mba hanana sehatra iombonana, nanangana fitaovana an-tserasera mba hahafahana maneho hevitra amin'ny fomba voalamina ao amin'ireo lahatsoratry ny tolo-kevitra ilay mpampianatra ao amin'ny Oniversite sady Dokotera amin'ny Siansa, Yudivian Almeida, izay efa bilaogera sady mpandray anjara tamin'ny tetikasa Bloggers Cuba .
Ampahan'ny tranonkalan'ny tetikasa Postdata Club, tarihan'i Almeida ity fitaovana ity, ary miasa amin'ny alalan'ny Disqus, fitaovana iray ahafahana mampiantrano sy mitantana fanehoan-kevitra ao amin'ny bilaogy sy ny vondrom-piarahamonina an-tserasera.
Nohadihadian'ilay mpanao gazety Milena Recio ao amin'ny Oncuba Magazine, manazava i Almeida fa ny votoaty lehibe hita ao amin'ny tranokala dia tohanan'ny teknolojia izay mampiasa tolotra fampiantranoana amin'ny aterineto, izay midika fa mbola afaka miditra ao amin'ny fitaovana nomerika ny olona, na dia tsy mifandray amin'ny aterineto aza. Izany, hoy izy, dia tena ilain'ny Kiobana izay voafetra ny fidirana amin'ny aterineto ao anatin'ny nosy ary koa mahatonga ity tetikasa ity ho tsimanampaharoa, satria ahafahana miditra amin'ny lahatsoratry ny Lalàmpanorenana vaovao mba hampitahàna azy amin'ny iray amin'izao fotoana izao.
Pikantsarin'ny PostData natokana ho an'ny adihevitra momba ny tetikasa ho an'ny Lalampanorenana vaovao. Etsy ankavia, afaka miditra amin'ireo lahatsoratra samihafa azon'izy ireo vakiana eo afovoan'ny pejy ny mpiserasera. Ny adihevitra, izay ampiasaina amin'ny Disqus, dia azo jerena eo amin'ny faran'ny sary. Ny lahatsoratra tsirairay dia mampiseho sehatra samihafa hifanakalozan-kevitra, mitovy amin'ireo sehatra fanehoan-kevitra ao amin'ny bilaogy sy ireo fitaovana web 2.0 hafa.
Ankoatra izany, azo ampiasaina tahaka ireo ao anatin'ny faritany nasionaly sy ireo izay mipetraka ivelan'ny nosy ny fitaovana. Ho an'ny olona maro izay tafiditra ao amin'ny fifanakalozan-kevitra efa mandeha an-tserasera, mety hitarika ny fiheverana azy ireo ho afaka hifidy ny fandraisana anjara amin'ny fizotry ny fakàn-kevitra amin'ny Kiobana monina any ivelany.
Nanazava ihany koa i Almeida fa fitaovana tsotra izay tsy mikasa ny hisolo toerana ny fifanakalozan-kevitra amporisihan'ny governemanta izany, ary mbola hitohy hivoatra izany satria mampiasa izany ireo mpandray anjara:
Ao amin'ny sehatra toy ity, dia tsy misy olona mangataka ny hiteny, tsy misy fandaharam-potoana hanaovana adihevitra. Afaka mandray anjara amin'ny adihevitra avy hatrany ny tsirairay rehefa mieritreritra vahaolana, fanontaniana, na fomba fiasa. Tsy misy fepetra ara-toerana sy ara-potoana apetraky ny fakàn-kevi-bahoaka izany.
Efa tamin'ny taona 2013 no nodinihana ny lalàm-panorenana vaovao natolotra. Nanolotra andian-dahatsoratra nodinihan'ireo mpikambana ao amin'ny parlemanta tamin'ny fivoriana ara-potoana nataon'ny Antenimieram-pirenena tamin'ny 21 sy 22 Jolay 2018 ny vaomiera notendren'ny Antenimieram-pirenen'ny Fahefam-bahoaka, nandritra ny parlemanta ankehitriny.